Sport Archives - BaravaNewsBaravaNews
Apr 11, 2018 Comments Off on Manchester United vs Cardif City
Sabtida Bishu ay tahay 07/04/18 Garoonka Manchester City waxa ka dhacay ciyaar aad iyo aad ukulul oo muddo dheer ay isugaayeen labada koox Manchester City iyo Manchester United. Ciyaartaas oo ku dhamaatay Manchester United 3 – 2 Manchester City.
Koxda Chelsea oo gurigeeda lagu garaacay 3-1 is la marka ayado ka baxday Champion League sanadka soo socda, waxaa si xun u garaacay kooxda Tottenham Chelsea waxay ku niyad dheereed in ciyartas ay ka badiso kooxda Tottenham lakinse nasiib daro waa laga badiyay.
Manchester United iyo Swansea 2-0
Manchester United oo maanta si qiyaas daran ay ka badisay kooxda Swansea, maanta bishu ay tahay 31-03-2018 garoonka Manchester United ee Old Trafford waxaa ciyaar aad iyo aad u kulul dhex maray labadan kooxood.
Manchester United haafka hore ay ka naxisay kooxda Swansea 2 gool oo ka dhaliyay ciyaar yahanka Lukaku iyo Sanchez.
Laakinse haafka dambe kooxda Livepool si wanaagsan ay u ciyaaren waxay keeneen gool oo si khalad is ka dhaliyay ciyaar yahanka Manchester United, ciyaarta waxay ku dhamatay 2 – 0
Kooxda Manchester United iyo Kooxda Swansea oo ku dhamaatay 2-0
Kooxda Manchester United Maanta bishu tahay 31/03/18 waxay si wanaagsan ay u garaacday Kooxda Swansea, ayadoo lagu ciyaaraayay kooxda Yeovil gurigeeda.
Ciyyartu aad aad bay u dkeed ee labada dhinac inkastoo haafka hore ay ku dhamaatay 1 iyo 0, laakinse haafka dambe Kooxda Manchester United si wanaagsan ay ciyaartay taas oo keeneen 2 gool. Oo dhaliyay goolka lowaad Lukaku iyo goolka labaad waxaa dhaliyay Sanchez. Ciyaartu waxay ku dhamaatay 2 – 0
Manchester United waxay iibsadeen ciyaar yahanka Arsenal
Kooxda Manchester United
Waxaa ku soo biiray ama iibsadeen bishan January Ciyaar Yahanka Arsenal oo ciyaari jiray waxaa iibsaday Kooxda Manchester Unted. Alexis Sanchez waa ciyaar yahan oo caan ku ah gool dalista wuxuu ka ciyaari doonaa dhincayaha garoonka asagoo sita fulaanad nambar 7.
Laga yaabo inuu la qabsan doono ciyaartooda Manchester United oo laga yaabo in uu bilaabi doono weega dambe waxan u rajeyneena in uu ku guuleesto ciyaartiisa.